'ब्लाइन्ड क्रिकेट'मा अट्ठा प्रहारदेखि रनआउटसम्म: कसरी खेल्छन् त? :: PahiloPost
'ब्लाइन्ड क्रिकेट'मा अट्ठा प्रहारदेखि रनआउटसम्म: कसरी खेल्छन् त?
10th February 2019, 05:20 pm | २७ माघ २०७५
काठमाडौँ : विश्वकै पहिलो महिला नेत्रहीन अन्तर्राष्ट्रिय टी २० सिरिज जितेपछि नेपालको नेत्रहीन क्रिकेट अहिले चर्चामा छ।
नेपालको महिला नेत्रहीन क्रिकेट टोलीले पाकिस्तानको महिला नेत्रहीन क्रिकेट टोलीलाई उसैको मैदानमा हराउँदै सिरिज क्लिन स्विप गर्‍यो।
पाँच खेलको सिरिजमा नेपालले चार खेल जित्दा बाँकी एक खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो।
पाकिस्तान ब्लाइन्ड क्रिकेट काउन्सिलको आयोजनामा भएको वर्ल्ड ब्लाइण्ड क्रिकेट लिमिटेडबाट मान्यता प्राप्त सिरिजमा ऐतिहासिक जित हात पारेको नेपाली नेत्रहीन क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किसकेको छ।
गत वर्ष नेपालको पुरुष नेत्रहीन क्रिकेट टोलीले ट्रेनको यात्रा गरेर पाकिस्तानमा ब्लाइन्ड वर्ल्डकप खेल्दा पनि नेपालको नेत्रहीन क्रिकेटको चर्चा भएको थियो। तर पछि त्यो चर्चा त्यतिमै सेलायो।
नर्मल क्रिकेटभन्दा केही फरक रहेको नेत्रहीन क्रिकेट कसरी खेलिन्छ भनेर सर्वसाधारणमा चासोसमेत बढेको छ।
रेगुलर क्रिकेट हेरे पनि र नेत्रहीन क्रिकेट नहेर्नहरुको लागि पनि यो कसरी खेलिन्छ होला भन्ने कौतुहलता जाग्नु स्वभाविक हो।
देख्नेहरुको लागिसमेत क्रिकेट खेल्नु कठिन हुने अवस्थामा नदेख्नेहरु त्यो पनि महिलाले कसरी खेल्छन् त क्रिकेट।
क्रिकेट जसले खेले पनि क्रिकेट नै हो। प्राय रेगुलर क्रिकेटकै नियम हुन्छ नेत्रहीन क्रिकेटमा पनि। तर रोचक कुरा आँखा राम्रोसँग नदेख्दा पनि उनीहरु अन्य खेलाडी सरह नै क्रिकेट खेलिरहेको जस्तो तरिकाले खेल्छन्।
चौका प्रहार गर्छन्। बोल्ड गर्छन्। क्याच लिन्छन्। रनआउट गर्छन्। नेत्रहीन क्रिकेटमा ब्याटिङ गर्ने खेलाडीको सट्टामा अर्को रनर कुद्ने भएकाले रनआउट हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
तर यसमा खेलिने बल र बलिङ गर्ने तरिका भने रेगुलेर क्रिकेटको भन्दा फरक हुन्छ।
कस्तो हुन्छ नेत्रहीनहरुले क्रिकेट खेल्ने बल?
साधारणतय क्रिकेट खेल्ने बल र नेत्रहीनहरुले क्रिकेट खेल्ने बल फरक हुन्छ। 'नर्मल बलको सबभन्दा भित्र सानो कर्कको डल्लो हुन्छ त्यसलाई उनि धागोले बेरिएको हुन्छ साथै कर्कको पत्र पनि हुन्छ र सबभन्दा बाहिर छाला राखेर सिलाईएको हुन्छ जुन एक दिबसिय वा अन्य खेल हरुमा प्रयोग हुन्छ।' नेपालको पुराना प्रशिक्ष अरुण कुमार अर्याले भने।
तर नेत्रहीनहरुले खेल्ने बल भने त्यो भन्दा फरक हुन्छ। उनीहरुले बल राम्रोसँग नदेख्ने हुँदा यस किसिमको बलभित्र बज्ने वस्तु राखिएको हुन्छ। जसले बलिङ गर्दा आवाज आउँछ र खेलाडीहरुले त्यसैबाट बल कता जाँदैछ थाहा पाउँछन्।
कडा खालको प्लास्टिकभित्र साइकल चेनको टुक्राहरु राखेर नेत्रहीनले खेल्ने बल बनाइन्छ।
नेपाल नेत्रहीन क्रिकेट संघका अनुसार यस्ता बलहरु भारत र पाकिस्तानमा मात्र बन्छ र त्यतै बाट नेपालमा ल्याइन्छ।
तीन क्याटेगोरीका खेलाडी, यसरी खेलिन्छ नेत्रहीन क्रिकेट
नेत्रहीन क्रिकेटमा तीन क्याटेगोरीका खेलाडी हुन्छन, बी वान, बी टू र बी थ्री। जसमध्ये प्लेइङ-११ मा बी वानबाट ४, बी टु बाट ३ र बी थ्री बाट ४ खेलाडी हुन्छन्। यस्तै प्रत्येक क्याटेगोरीका एक-एक एक्स्ट्रा खेलाडी हुन्छन्।
पहिलो क्याटेगोरीका खेलाडी पुरै नदेख्ने हुन्छन्। बी टु क्याटेगोरीका खेलाडीले ५ मिटरसम्म देख्छन् भने बी थ्री क्याटेगोरीका खेलाडीले ५ देखि १० मिटरसम्म देख्छन्।
बी वान क्याटेगोरीका खेलाडीले ब्याटिङ गर्दा अन्य दुई क्याटेगोरीबाट एक खेलाडी रन लिन रनरका रुपमा प्रयोग गर्छन्। उनीहरुले आफैँ रन लिन नसक्ने भएकाले बी वानको लागि रनरको व्यस्था गरिएको हुन्छ। यस्तै बी टू ले पनि आफूले चाहेको खण्डमा बी थ्री क्याटेगोरीका खेलाडी रनरको रुपमा राख्न पाउछन्।
यसैगरी बी वान क्याटेगोरीका खेलाडीले बनाएको रनसमेत डबल गणना हुन्छ। बी वान क्याटेगोरीका खेलाडीले एक रन प्रहार गर्दा बोनस स्वरुप एक रन थप पाउछन् र दुई रन हुन्छ। यसैगरी चौका हान्दा ८ रन र छक्का हान्दा १२ रन पाउँछन्। पाकिस्तानमा भएको सिरिजमा एक पटक मात्र बी वान क्याटेगोरीका खेलाडीले चौका प्रहार गरेका थिए र त्यो ८ रनमा गणना भएको थियो। र त्यस्तो भाग्यमानी खेलाडी नेपालकै मुना अर्याल बनेकी थिइन्। उनले पाकिस्तानविरुद्ध चौका प्रहार गर्दा त्यो ८ रन बनेको थियो।
नेपाल-पाकिस्तान सिरिजमा छक्का भने प्रहार भएन। यद्यपि नेपालकी मनकेसी चौधरी एक्लैले ३२ चौका प्रहार गरेकी थिइन्। बी टू क्याटेगोरीकी खेलाडी चौधरीले दुई अर्धशतकसहित कूल १८३ रन प्रहार गरेकी थिइन्।
कसरी गरिन्छ बलिङ?
यस्तै बलिङ गर्दा बलिङ गर्ने खेलाडीले विपक्षी टिमको ब्याट्सवुमन र विकेटकिपरलाई सोधेर मात्र बलिङ गर्नुपर्छ। बलिङ गर्दा विपक्षी ब्याट्सम्यानलाई रेडी भनेर सोध्नुपर्छ र 'यस' भनेपछि मात्र बल फाल्नुपर्छ। यस्तै आफ्नो टिमको विकेटकिपर र फिल्डरलाई समेत पनि रेडी भनेर सोधेर बल फाल्नुपर्छ।
बलरले बलिङ गर्दा स्टम्पछेउको लाइन कटाएर पहिलो बाउन्स गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा अगाडी बल बाउन्स भएमा 'नो बल' हुनेछ। यस्तै पिचको बीच भागमा एउटा सेता लाइन कोरिएको हुन्छ। त्यो लाइनभन्दा पर बाउन्स भएमा पनि नोल बल हुन्छ। यस्तै लाइन भन्दा वर नै बल बाउन्स भएर सीधै ब्याट्सवुमनसम्म पुगेमा पनि नो बल हुनेछ।
२० ओभरको खेलमा एक टिमबाट बी वान क्याटेगोरीका खेलाडीले कम्तीमा पनि ८ ओभर बलिङ गर्नुपर्छ। दुई इनिङ्स गरेर कूल ४० ओभरमध्ये १६ ओभर बी वान क्याटेगोरीका खेलाडीले गर्नेछन्।
त्यसबाहेक थप ओभर पनि बी वान क्याटेगोरीले बलिङ गर्न पाउँछन्।
बलको आवाज सुनेर ब्याटिङ र फिल्डिङ?
बी वान क्याटेगोरी जो पूरै नदेख्ने हुन्छन् उसको लागि बलको आवाज नै खेल्नको लागि एक मात्र माध्यम हुन्छ। बलिङ गर्दा विपक्षी र आफ्नो टिमका खेलाडीलाई सोधेर बलिङ गर्छन्। तर ब्याटिङ र फिल्डिङ गर्दा भने उनीहरुले बलको आवाज सुनेर अन्दाज लगाउँछन्। ब्याटिङ गर्न बस्दा विपक्षीले बलिङ गरेको बल कता आउँदैछ भनेर बलको आवाज सुनेर ब्याट चलाउँछन्।
यस्तै फिल्डिङ गर्दा पनि विपक्षी ब्याट्सम्यानले प्रहार गरेको बल कता जाँदैछ भनेर त्यसको आवाजको सहायताले फिल्डिङ गर्छन्। बी वानको लागि फिल्डिङ गर्दा केही गाह्रो हुन्छ। उनीहरुले आफू छेउ आएको बल मात्र रोक्न सक्छन् अन्यथा त्यो बल चौका हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
'ब्लाइन्ड क्रिकेट'मा अट्ठा प्रहारदेखि रनआउटसम्म: कसरी खेल्छन् त? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।